Waraaqo Bahir-Dar Lagu Daadiyay & Xaalada oo Kacsan. | ogaden24
May 20, 2018 - Aragtiyood
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Bahardar ee xarunta Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ay jawi nabad galiyo daro kujirto magaaladu kadib markii suuqyada magaalada lagu daadiyay waraaqo aad ubadan.
Sida xogta aan kuhelayno waraaqaha magaalada lagu daadiyay ayaa shacabka loogu baaqay in ay fadhiga kakacaan isla markaana xaqooda iyo xuquuqdooda raadsadaan, sidoo kale waxaa shacabka Axmaarada laga codsaday in ay xaqa taageeraan xaqdaradana diidaan inta ay goori goortahay.
Sidoo kale waraaqaha ladaadiyay oo dhowr luuqadood lagu sooqoray ayaa ciidanka wayaanaha iyo maamul kusheega gumaysiga lashaqeeya lagaga codsaday in ay joojiyaan cadaalad darada iyo xasuuqa aan xadka lahayn ee shacabka lagu hayo, waxaana loogu nasteexeeyay in ay shacabka xaqooda baadi goobaya sooraacaan inta uusan wakhtigu kadhicin.
Waraaqahan lagu daadiyay magaalada Bahardar oo aan la garanaynin cida daadisay ayaa siwayn jawiga magaalada wax uga badalay, waxaana lasheegayaa in ay cabsi kubeereen ciidanka wayaanaha iyo maamul kusheega Gobolka, halka shacabkuna ay aad ugu sheekaystaan waraaqahan.
Dhinaca kale magaalada Samu ee Gobolka Gojam ee dhulka Xabashida ayaa maalin nimadii shalay ahayd lagu dilay 3 kamid ah beeralayda Xabashida, kuwaas oo sida lasheegay lagu marjiyay ama lagu daldalay beerahooda gudahooda, waxaana maydkooda soosheegay dad kale oo beeralay ah oo aagaas kusugnaa.
Falkan foosha xun ee lagula kacay dadka shacabka ah ee Axmaarada ah ayaa lasheegayaa in ay kadambeeyeen ciidanka Agaziga oo indhawaalaba waday uus-xabaal iyo marjin ay kuhayeen shucuubta kala duwan ee wadanka gumaysiga Itoobiya kudhaqan.